XOG XASAASI: ‘‘Maanta Hargeysa Xamar ayaa laga dhigay, wixii dhacayna waxaa mas’uul ka ah Xukuumadda Muuse Biixi‘‘! waxa yiri… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: ‘‘Maanta Hargeysa Xamar ayaa laga dhigay, wixii dhacayna waxaa mas’uul...
XOG XASAASI: ‘‘Maanta Hargeysa Xamar ayaa laga dhigay, wixii dhacayna waxaa mas’uul ka ah Xukuumadda Muuse Biixi‘‘! waxa yiri…
Sacad Cali Black
Hargeysa (Halqaran.com) – Xoghaye ku-xigeenka arrimaha gudaha ee xisbiga Waddani Sacad Cali Black, ayaa xukuumadda Somaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi ku eedeeyay in ay qal-qalgelineyso xaaladda ammaan ee Somaliland, gaar ahaan xaaladda nabad-galyo ee Maroodi-Jeex.
Mr. Black ayaa sheegaya, in xukuumada Somaliland ay subixii Isniinta waddooyinka soo dhoobtay ciidamo aad u fara badan, iyagoona ciidamo kale hor-dhigay xarunta xisbiga Waddani ee magaalada Hargeysa.
Taageerayaasha Xisbiga Waddani, ayaa maanta xoog ku galay xarunta Xisbiga, kaddib markii loo diiday inay gudaha u galaan xarunta.
Haddaba hoose ka daawo Muuqaalk Xoghaye ku xigeenka:
DAAWO VIDEO: Guddoomiye Cirro ‘‘Hargeysa waxa ka socda waa Fal Argagixisnimo, mana aqbalayno‘‘!
XOG CUSUB: Maxay DF Somaliya kaga jawaabtay muddo kordhinta xayiraadda Hubka ee saaran Somaliya?!
DEG DEG: Taliyihii NISA ee gobolka Mudug oo Caawa lagu dilay Gaalkacyo
Guddoomiyaha Maxkamadda ciidanka Qalabka Sida oo maanta tagey magaalad Gaalkacyo + (Ujeedka)
SAWIRRO: Madaxweyne Axmed Madoobe oo hadda kadib la xisaabtamaya Wasiirrada Jubbaland
Dagaal khasaare geystay oo ka dhacay degmada Diinsoor & Wararkii ugu dambeeyay
Xoghaye ku-xigeenka arrimaha gudaha ee xisbiga Waddani Sacad Cali Black